Dharka LED & Agabka
Koofiyadaha LED & Dharka madaxa
Faa'iidooyinka Xisbiga LED
Ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee Halloween waxaa ka mid ah iska yeelyeelka rooxaanta, qaniinyada tufaaxa iyo samaynta laambadaha bocorka?
by admin on 21-10-26
1. Iska yeel in aad tahay ruux rooxaan ah: Halloween dhab ahaantii waa dabbaaldegga rooxaanta ee Galbeedka. Tani waa maalin ay rooxaantu yimaadaan oo tagaan. Dadku waxay rabaan inay ka bajiyaan sida rooxaanta oo kale. Haddaba maalintan, dad badan ayaa xidhan doona dhar qariib ah, oo iska dhigi doona rooxaan, oo waddooyinka wareegaya. Sidaa darteed, dadka jahawareerka ah waa inay...
Maxaan u baahanahay si aan ugu diyaariyo Halloween?
by admin 21-06-01
1. U diyaari nacnaca Halloweenka, maalintii iyo habeenkiiba waad kulmi kartaan, ama waxaad aadi kartaa guriga saaxiibkiis si aad u weydiiso macmacaan. Waxaa jira odhaah ah "khiyaamo ama daaweyn" waa la yaab Halloween. Markaa nacnac maalintaan waa waajib. 2. Diyaari dharka sixirka Dharka sixirka ...
Waa maxay jack-o-lantern, iyo waa maxay sababta jack-o-lantern? Dhaqanka xafladda?
Halloween Eve waxay ka timid xafladaha la xidhiidha rooxaanta sharka leh, sidaas darteed saaxiriinta, rooxaanta, goblins iyo qalfoofyada ku yaal sticks-ka waa dhammaan calaamadaha Halloween. Fiidmeerta, guumaystaha iyo xayawaanka kale ee habeenka ayaa sidoo kale ah calaamadaha caanka ah ee Halloween. Markii hore, xayawaankani waxay dareemeen cabsi badan sababtoo ah waxaa loo maleeyay ...
Maxaa loo ciyaaro Halloween? Shayada jawiga Halloween ee ugu caansan waa halkan!
1. Maaskaro maaskaro ah oo iftiin leh, sida mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee qosolka leh ee Halloween, waxay had iyo jeer ahaayeen geedaha weligood cagaarka ah ee alaabta jawiga Halloween. Laga soo bilaabo waji-xidhaha caadiga ah ee ugu fudud ilaa kuwa hadda midabka leh ee iftiinka leh, laga bilaabo jilayaasha ilaa qurxinta wejiga ilaa jilayaasha kartoonnada madaxa xayawaanka, t...
Shirkadda ENG Industrial Co.,LTD
Cinwaanka Hoolka Bandhiga: 14 /F,Yongtong Building.Renmin North Road,Luohu Degmada, Shenzhen
Shirkadda SHENZHEN NOVIT ELECTRC
Saldhigga wax soo saarka: 200-1, Shilianxin Road, WulianZhugu, Degmada Longgang, Shenzhen
Khadka Taleefanka: 86-755-82374286
Cinwaanka: Dabaqa 14aad, Block A, Dhismaha Yongtong, 3146 Renmin North Road
© Xuquuqda daabacaadda - 2021: Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin. Alaabooyinka Kulul - Khariidadda goobta
Gacan-gacmeedka Led, dhalaalid, Usha Led, Led Spinner, Led Tumbler, Seef Fudud,